‘नेपालबिना भारत अधूरो’– शत्रुघन सिन्हा - अचानक - नेपाल
‘नेपालबिना भारत अधूरो’– शत्रुघन सिन्हा
तारन्तार नेपाल आइरहने बलिउड सेलिब्रिटी हुन्, शत्रुघन सिन्हा, ७२ । यसपालि नवलपरासीको शाश्वतधाम घुमेका उनले अर्को पटक सौराहामा जंगल सफारी र पोखरामा जलविहारको कार्यक्रम बनाएका छन् । सिन्हासँग गरिएको कुराकानी :
नेपाल कति पटक आउनुभएको छ अहिलेसम्म ?
गनेकै छैन । मेरो पहिलो विदेश भ्रमण नै नेपालमा थियो । १६ वर्षको हुँदा जनकपुर आएको थिएँ । मेरा अभिभावक रामजानकीका परमभक्त भएकाले उहाँहरुसँगै आएको थिएँ । जनकपुरका मन्दिर र महिला निकै सुन्दर लागे । अहिले पनि बेलाबेला त्यो समय सम्झन्छु । नेपाल आउँदा पानीपँधेरो धाएजस्तै लाग्छ ।
के–कति कारणले आउनुभएको हो ?
नितान्त तीर्थाटन गर्ने उद्देश्य मात्र थियो । नेपालका धेरै तीर्थस्थल पहिले नै पुगिसकेको छु । यसपालि शाश्वतधाम गएँ । निकै सुन्दर र अनुपम रहेछ । मौसमले साथ नदिएकाले त्यहीँ नजिकैको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज जान पाइनँ । अर्को पटक सपरिवार आउँछु र चितवनमा जंगल सफारी गर्छु । अनि, पोखरामा डुंगा पनि सयर गर्छु ।
यसपालि केही फरक अनुभव भयो ?
त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिर निस्कने बेला बुकस्टोरका मालिकले मेरो आत्मवृत्तान्त एनिथिङ बट खामोसमा हस्ताक्षर गराए । प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य शीर्ष नेतासँग पनि भेटेँ । दुई देशको सम्बन्ध कसरी थप सुदृढ बनाउँदै लैजाने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो ।
दुई देशको सम्बन्धबारे कस्तो विचार राख्नुभयो त ?
नेपाल र भारत एकअर्काका अभिन्न मित्र हुन् । नेपालबिना भारत अधूरो, भारतबिना नेपाल अधूरो । हामीलाई जोड्ने सिमानाले मात्र होइन, भावनाले पनि हो । विगतका तिक्तता कम गर्दै लैजान दुवै पक्षबाट उचित पहल होस् भन्ने धारणा राखेँ । उहाँहरुले होमा हो मिलाउनुभयो ।
नेपाल हुँदै मानसरोवर जाने योजना पनि थियो ?
थिएन । राहुल गान्धीको यात्रालाई लिएर अनावश्यक ‘ट्रोल’ गरेकाले उनको पक्ष लिँदै ट्वीट गर्दा धेरै झुक्किएका हुन् । उनको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि बेतुकसँग हस्तक्षेप गर्नु उचित थिएन । जवाहरलाल नेहरु, इन्दिरा गान्धीजस्ता व्यक्तिको परिवारबाट आएका राहुलमाथि सबै एकैचोटि खनिँदा चुप लागेर बस्न मेरो ब्रह्मले दिएन । विपक्षी दलको नेताको समर्थनमा बोलेकाले कतिले मलाई पनि गाली गरे । तर, मलाई नकारात्मक टिप्पणीले छुँदैनन् ।
चलचित्र क्षेत्रबाट सन्न्यास लिनुभएको भन्ने हल्ला सुनिन्छन् नि !
बिलकुलै होइन । राजनीतिमा बढी सक्रिय भएकाले चलचित्रमा समय दिन नपाएको हुँ । धेरै वर्षपछि धर्मेन्द्रको आग्रहमा यमला पगला दिवाना फिर सेमा सानो भूमिका निर्वाह गरेको छु । उहाँ मेरा परममित्र भएकाले अनुरोध नकार्न सकिनँ । राजनीतिमा आएका कलाकारले चलचित्रलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छन् । मैले अहिले नभ्याएको हो । तर, समय मिल्नासाथ फेरि आउँछु ।
नेपालमा तपार्इंका चलचित्र कत्तिको हेरिन्छ जस्तो लाग्छ ?
मज्जाले हेरिन्छ । नेपालीलाई हिन्दी बुझ्न खासै गाह्रो पर्दैन । नेपालमा जहाँ गए पनि मलाई देख्नेबित्तिकै परबाट ‘खामोस’ भन्छन् । म आफैँलाई थाहा छैन, त्यो कुन चलचित्रको डाइलग हो । तर, रमाइलो लाग्छ । यसैले त मलाई चिनाएको छ ।